Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Eritrea: nampiseho fandriam-pahalemana ny Ethiopian Airlines tamin'ny alàlan'ny fizahan-tany androany
Mihoatra noho ny fiaramanidina Ethiopian Airlines manidina any Eritrea mpifanila vodirindrina aminy, fanamafisana hafa ny fandriam-pahalemana eo amin'i Etiopia sy Eritrea. Fihavanana izany amin'ny alàlan'ny fizahan-tany na fiaramanidina.
Androany ny Ethiopian Airlines dia nanambara fa tonga tany Asmara, Eritrea mpifanila vodirindrina aminy, tamin'ny sidina VVIP notarihin'i HE Dr. Abiy Ahmed, praiminisitra ny Repoblika Demokratika Federalin'i Etiopia.
Na dia mankalaza ity andro mahafinaritra ity eo amin'ny tantara aza isika, dia mirary fiadanam-po maharitra, finamanana ary fanambinana ho an'ny vahoaka Eritreana sy Etiopiana.
Manantena izahay fa tsy ny hampifandray an'i Eritrea amin'i Etiopia ihany fa ny hampifandray an'i Eritrea amin'ireo tanjona iraisam-pirenena maherin'ny 114 any amin'ny kaontinanta 5 miaraka amin'ny fiaramanidina maoderina.
Ny tanànan'ny sisin-tanin'i Etiopia izay tsy dia misy dikany loatra dia ny nipoahan'ny ady tamin'ny 1998 teo anelanelan'i Etiopia sy Eritrea, naharitra roa taona ary nandrava ireo firenena roa tonta.
Hatramin'ny nijanonan'ny tanàna, na dia teo aza ny ramshackle, fisehoana tsy dia misy dikany, marika famantarana ho an'ny firenena roa tonta, voalohany indrindra na dia teo aza ny fifanarahana iraisam-pirenena Algiers Peace Accord izay nanaraka ny fiatoana 2000, ary nitarika ny didim-pitsarana fa hiverina any Eritrea i Badme. Etiopia dia nijanona tamim-pahatokiana tao an-tanàna.
Noho izany, Badme dia nivadika ho loharanom-pandrika nandritra ny taona maro izay nivadika am-polony taona maro, niaraka tamin'ny governemanta Etiopiana sy Eritrea tonga nifankahala, raha ny sisin-tany rehetra kosa dia niady ny firenena, nifamaly maso ny miaramila.
Saingy tampoka teo am-piandohan'ny volana Jona dia nanambara ny fahavononany hanaja tanteraka sy hampihatra ny Algiers Peace Accord i Etiopia, iray amin'ireo hetsika fanavaozana mbola tsy nisy toa azy tamin'ity taona ity, ary tsy mampiseho mariky ny fihemorana hatramin'ny fifidianana aprily. praiminisitra vaovao izay nivoady handray an'i Etiopia amin'ny lalana vaovao demokratika sy feno fanantenana.
Nanambara ihany koa ny governemanta Etiopiana fa hanaiky ny valin'ny fanapahan-kevitry ny vaomiera tamin'ny sisintany 2002, izay nanome faritany niadian-kevitra fantatra amin'ny anarana hoe Triangle Yirga, eo amin'ny tendrony misy an'i Badme, mankany Eritrea.